Wiricheya Uchapupu uye Ongororo yeKarman & vatengi mukati meUSA
Check out kwedu hwiricheya Ongororo uye Uchapupu. Tinogamuchira vese vatengi vedu kusiya wongororo. Zvese zvakanaka nezvakaipa, asi zvakanyanya kutendeseka. Ndokumbirawo ugovane nesu yako hwiricheya nyaya. Kunyangwe iwe wakauchisa wega kana kuutengera kune waunoda. Isu tine hanya nezve iyo hwiricheya wongororo uye zvipupuriro zvaunogona kugovana nekubata vamwe nenyaya imwe chete. Pazasi iwe unowana ongororo zvese paGoogle uye Yopto ayo ari varified vatengi maari isu tinovimba iwe unogona kuvimba uye kuvimba nawo.
19255 San Jose Avenue, Guta reIndasitiri
4.6 239 wongororo
Angela Holstein ★★★★★ 4 ago
Iyo kambani inoshamisa. Takatambira zvedu hwiricheya asi nekuti yakakwidziridzwa, Hardware yakapotsa nekusaziva. Akatumira email kambani uye akawana mhinduro mukati memaawa mashoma. Tiri kuEast Coast. Amber yaive yakanaka chaizvo. Kunzwisisa … Zvimwe chigadzirwa uye akaziva pakarepo zvakaitika. Nguva yake yekupindura yaive yakanaka uye akagadzirisa dambudziko redu nekukasira. Hatina kukwanisa kukumbira sevhisi yevatengi iri nani. Vane rombo rakanaka kuti vari kuvashandira. Isu tinogutsikana zvakanyanya nechigadzirwa chedu uye tinovakurudzira zvakanyanya kune chero kutenga kwekurapa.
Sarah Goodlin ★★★★☆ 6 ago
Takamirira nguva refu kupfuura yandaitarisira kugamuchira chigaro, asi inotyisa! Ikareruka, asi yakasimba uye iri nyore kufambisa.
Susan Nielsen ★★★★★ 11 ago
Vamwene vangu vanoda Karmen wavo mutsva hwiricheya. Iye zvino ave kugona kuenda zviri nyore kufambidzana nesu uye anogona kufamba kana achida uye kuchovha kana akaneta. Ndatenda Karmen yechigaro chisina kureruka!
Mufaddal Khambati ★★★★★ 5 ago
Inoshamisa siyana pamitengo inoshamisa! Kurumbidza kune vese!
Peter Pan ★☆☆☆☆ muvhiki rapfuura
Wow uyu anotaridzika kunge Mutevedzeri weMutungamiriri weKarman Healthcare uye akaita semhuka yakazara achitorwa mifananidzo panzvimbo yeruzhinji. Akatorova vatori vemifananidzo katatu. Zita rake rinoita kunge David Chao anosiririsa munhu.
Mike Buso ★★★★★ 9 ago
Takatorera Karman S-Ergo 115 yemukadzi wangu. Ini ndinonyatso kukoshesa kuti yakareruka zvakanyanya kupfuura inorema zvakanyanya mavhiripu izvo vamwe vakatipa. Makirogiramu gumi haana basa kana iwe uchingotenderedza iyo, asi kana ukasimudza … Zvimwe iyo mukati nekubuda mumotokari, zvine basa zvakanyanya. Parizvino, izvi hazvidi chero kuchengetedzwa, uye ndinovimba uye ndinotarisira kuti zvicharamba zvakadaro. Ini ndinokurudzira zvikuru.
David Bacon ★★★★★ gore rakapfuura
Semuchengeti wababa vangu, ndaida a isina kurema wheelchair izvo zvandaigona kushandisa naye chero nguva patinenge tiri kure nenzvimbo yake yekurega basa. Mushure mekutsvaga akati wandei akasiyana marudzi e mavhiripu, Ndakaraira iyo LT-980. Ndakaigamuchira … Zvimwe nezuro, uye ndafadzwa nekuvaka unhu uye ese maficha anoita kuti itakurike uye nyore kutakura. Kuva neruzivo nekuremerwa mavhiripu nguva refu yapfuura, iyo LT-980 chigaro chikuru kune chero munhu anoda chimwe chinhu chakareruka. Zvinosuruvarisa, baba vangu vakashaya nguva pfupi yadarika vasati vawana mukana wekuishandisa, asi ndinoifarira uye ndichaichengeta kuti izoshandiswa munguva inotevera nedzimwe nhengo dzemhuri dzinogona kunge dzichida.
Monique Dreef ★★★★★ 11 ago
Ndakatenga Karman 19" Simbi Yekutakura Chigaro ne / inobvisika armrests. The transport chair iri nyore kusunda uye inopinda nepamasuwo enguva dzose. The arm rest (s) zviri nyore kubvisa kana zvichidikanwa. Inogona kubvisa kuzorora kwegumbo kana kuasundira kune … Zvimwe mativi (haazogara munzvimbo kunze kwekunge ari kumberi, asi ndiko kugadzirisa kuri nyore neVelcro tambo). Chigaro chine a cushion mutete. Pane bhandi rakasungirirwa kuchengetedza munhu ari pachigaro. Mavhiri anokunguruka zviri nyore pahuni yakaoma, mataira & kapeti. Izvi transport chair iri nyore kupeta kuchengetedza. (katsi yakatenderwa!)
Amy Arenson ★★★★☆ gore rakapfuura
Iyi ndiyo yedu yekutanga Karmen hwiricheya uye kusvika zvino zvave zvakanaka chaizvo. Tiri kushandisa icho sachigaro weshanduko wekubvisa murume wangu musimba rake hwiricheya. Icho chakareruka uremu, zviri nyore kupeta uye kukwana musana yeSUV yangu. … Zvimwe Murume wangu anoti zvakanyatsogadzikana kwenguva pfupi yekugara, akajaira kuve "akachengetedzeka kwazvo" muchigaro chake chemagetsi saka achiri kugadzirisa asi achifunga kuti chichava chigaro chakakura mukufamba kwenguva! Kutumira nekukurumidza kwazvo, zvese zvakafamba zvakanyatsonaka kana uchiraira futi!
Michael Smith ★★★★☆ 11 ago
Kufadzwa kwazvo neizvi hwiricheya Ndiri kukwanisa kutenderera zvirinani. Ivai nematambudziko mashoma nekusunungura makumbo mamwe ipapo iro rakakura chigaro!
Gadzira Mahoney ★★★★★ gore rakapfuura
Karma ndizvo zvataive tichitsvaga, chigaro chakareruka mwanasikana wangu aigona kuisa mumota zviri nyore kana aifanira kundiendesa kumwe kunhu sezvo ini ndisingafambise 82 uye gumbo rerudyi pamusoro pebvi rakatemwa. Mukadzi uyo mwana wangu akataura naye aive akanaka uye anobatsira. Hauna … Zvimwe tora nguva kuti ununurwe. Uye nyore nzira dzekuisa pamwechete. Zvishoma zvekuita kubva kunongedzo uye kazhinji zvakaitwa kare. Chaizvo vanhu vakuru vekushanda navo. Ndotenda kwazvo.
Blanca Arteaga ★★★★☆ gore rakapfuura
Ndakahodha chigaro ichi kumukomana wangu ane MS. Yakagadzirwa zvakanaka. Yakasimba kwazvo. Ndakahodha anti tippers asi Handina kumbobvira ndavabata nechigaro. Ini ndatumira email asi handisati ndanzwa kubva kwavari. Asi iwe uchafarira kuti yakagadzirwa zvakanaka sei .. Heano … Zvimwe mapikicha akati wandei. Kuvhara kwemaoko ekuzorora hakuuyi nawo.
Karen Sachs ★★★★★ gore rakapfuura
Isu tine transport chair nhasi kumukadzi wangu arikuvhiyiwa tsoka yake uye anotofanira kumbomira kwe6 kusvika 8 weeks. The unhu yakatanhamara uye inonyatsogadzikana. Zvaive nyore kuisa pamwechete - ini handina kuwana iwo mafambiro … Zvimwe (iyo yaive muhomwe kuseri kwechigaro kusvika mushure mekunge ndayiunganidza.
David Brand ★★★★☆ gore rakapfuura
Ingo gamuchira iyo aluminium 24 lbs hwiricheya yangu mudiki, amai vakura vane maparkinons ekushandisa. Inoita kunge inoshambadzirwa, iri kutarisira kuiendesa kwaari munzvimbo yake yaanogara yekugara mangwana. Yakarairwa kuburikidza neAmazon, yakagamuchirwa … Zvimwe iyo chaiyo modhi, kwete iyo chaiyo kara. Ndakaodzwa mwoyo kuti burgundy cheya cheya yakanga isiri iyo yakasvika, asi isu takawedzera mamwe maribhoni kuti iye azive kuti chigaro ndechake. Kutarisira kuti achazowana mashandisiro mazhinji mairi.
Rodger Gerzema ★★★★☆ gore rakapfuura
Aida chigaro chisina kureruka. Ungasarudze mavhiri erabha uye kwete epurasitiki yakaoma. Ivo vanosiya yaMark pane yakakwenenzverwa matairi pasi. Pakazara sarudzo yakanakisa yekutakura.
Ashleigh Pasley ★☆☆☆☆ gore rakapfuura
Varombo kushandira vatengi. Sachigaro haachinjiki, asingakwanise kuwana runhare kubva kukambani kuti abatsirwe pasingasviki gore rapfuura, apo murwere wangu paakatenga (ndiri murapi mumusha unochengeterwa vakwegura.) Akabhadhara anopfuura $ 1,000.00 muhomwe yechigaro ichi. Zvino, … Zvimwe neavhareji kushandiswa uye isingasviki gore gare gare, mavhiri epamberi ari kubvarura uye kudonha. Haishandisike, uye Karma yakanakisa inogona kupa murwere wangu "heino nhamba yechinhu, varaire pa $ 100.00 yevaviri." Zvinonzwisa tsitsi. Rudzii rwe hwiricheya kambani inobata vanhu seizvi. Chigaro chakavakwa chisina kusimba, uye kana vangova nemari yako, vapedza newe. Chenjera!
Gloria naFred Rau ★★★★★ gore rakapfuura
S-115 ichangobva kutambirwa ndivo vadzimai vangu vechitatu Karman chair, Akanaka kwazvo, akareruka uye anoshanda chaizvo.
Sandy Gordon ★★★★★ gore rakapfuura
Yakarairwa yakasarudzika isingaremi Kerman hwiricheya kuburikidza neWalgreens.com. Kutumirwa kubva kuCalifornia nekukasira uye ndizvo zvandakaraira.
Dena Blum ★★★★★ gore rakapfuura
Ndakatenga Karman S-ERGO 305 Lightweight Ergonomic hwiricheya S-Ergo305Q16SS, 29 lbs., Kurumidza Kuburitsa Mavhiri, Sisitimu Rose Tsvuku, Chigaro Saizi 16 "WX 17" D, Fekitori Inogadziriswa Chigaro Kureba (Default 19 "Floor Kuti Ugare) uye zvinonakidza. … Zvimwe Ndiri munhu mudiki uye ndinonyatsoda hupamhi hwechigaro. Zviri nyore kushandisa zvakare.
Jillisa Pierson ★★★★★ gore rakapfuura
Ndakagamuchira yangu hwiricheya nekukurumidza uye zvinoshamisa. Icho chakareruka chaizvo zvigaro zvepachigaro zvakapfava uye zvakasununguka. Ndinonyatsochida. Uye imwe yekutenda yekutenda nekushanda ne ms nzanga.
Beverly Miloszewski ★★★★★ gore rakapfuura
The hwiricheya yaive yakakwana kuna amai vangu vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe naBaba vangu vanozoda kuitakura nekuiturunura. Kutumira kwakatora chinguva sezvo ruvara rwacho rwakanga rusipo muzvitoro, mwaka wezororo uye chiitiko chemamiriro ekunze! Asi, yakasvika mune yakanaka mamiriro uye Amai vangu vanoda … Zvimwe it!
Judy Gilson ★★★★★ gore rakapfuura
Anofara kwazvo nechigadzirwa chakavakirwa nhengo yemhuri zvakare zvakareruka kuisa mumotokari kushanya kwachiremba.hwiricheya inofamba zvakasununguka pakapeti uye nepamusuwo edzimba.
Dana Crowley ★★★★★ gore rakapfuura
Ichi chikuru hwiricheya. Inotaridzika kunge yakanaka. Iyo yakareruka, asi yakasimba. Inopeta nyore nyore kuchengeta. Chikurukuru, yakagadzikana maererano nababa vangu vachembera. Kukosha kukuru kwemari.
bhiri lutz ★★★★★ gore rakapfuura
Wakaigamuchira nhasi, kukurumidza kuendesa uye yakanyatso kukwana. Chigaro chakareruka zvakakwana kuti murume wangu atore nyore. Takazvitenga kuti tirerutse kufamba uye tichakwanisa kupeta uye kutumira sekutarisa mukwende. Anofara kwazvo ne unhu, … Zvimwe tsoka dzekuzorora dzakaparadzaniswa asi zviri nyore kuisa uye kubvisa. Ndiri mupfupi, 4 ”11, uye chigaro chinondikwanira zvakanaka. Ini ndinogona kusvika mabhureki kubva ndakagara chinzvimbo.
John Ruble ★★★★★ gore rakapfuura
dzose mavhiripu anongorema zvekutakura kana kudzika masitepisi. Ndakawana Karman featherweight pamutsetse ndikatenga. Zviri nyore kutakura nekudzika masitepisi uye mukadzi wangu anoti zviri nyore uye nyore kuzvifambisa iye. Just … Zvimwe mhinduro kwatiri.
Douglas Rappe ★★★★★ gore rakapfuura
Isu tangogamuchira yedu S Ergo 115 hwiricheya uye zvakanaka. Saizi 16 "inokwana zvakakwana uye yakasununguka uye haina kureruka. Makushoni echigaro anobviswa uye chigaro chakakomberedzwa zvinhu zvakanaka kwazvo. … Zvimwe mavhiri ekukurumidza-kuburitsa anokwana zvakakwana mumashure memota yedu diki.
Frank G. ★★☆☆☆ gore rakapfuura
Zvakanakisa. Yakavakwa zvakanaka asi iwe wakanditumira iyo isiri iyo ruvara. Ndakahodha burgandy rimwe ndikawana rakasviba.
Luana McCuish ★★★★★ gore rakapfuura
Akatenga Karman transport chair ine 19" chigaro. Yakauya yakaungana zvakazara kunze kwezvitsigiro zviri nyore kubatika. Chigaro chakanakisa. Inopeta nyore, inonzwa yakachengeteka, yakasununguka uye isingaremi. Zviri nyore kufambisa. … Zvimwe uye kiya. Uku kuchave kubatsira kukuru naamai vangu vakura.
DZVANYA PANO KUTI UWONESESE WHEELCHAIR TESTIMONTIALS UYE KUTI UNOGONESESA PAGOOGLE & GADZIRA YEMAHARA PROMO
Rangarira kunyorera kune edu matsamba uye tarisa yedu blog. Kune nyika yeruzivo inoenderana ne kufamba uye hwiricheya vashandisi saka tinokukurudzira kuti usiye ongororo, mapikicha, uye ugovana nyaya yako negoogle uye nharaunda zvese pane yedu Facebook uye BLOG chikamu. Iwe uchave uchifara zvawakaita uye tinokutendai nekujoinha nesu. Usakanganwa kunyoresa warandi yako kungava chete kana kutumira mune yako kiredhiti kadhi kuitira kuti tikwanise kukuchengeta iwe pafaira kana iwe uchida chero rubatsiro pasi pemugwagwa. Kana iwe uri Yelper, ndapota taura pane yedu Yelp account. Tinokutendai!
mushandisi hwiricheya Testimonials
“Izvi ndizvo chete zvakanakisa hwiricheya Ndakamboshandisa. ”
“Izvi ndizvo chete zvakanakisa hwiricheya Ini ndakamboshandisa. Ndakaedza mamwe marudzi uye vaigara vaine dambudziko rimwe kana rimwe. Ichi chigaro chakanyatsogadzikana. Nekuda kwechirwere cheshuga uye kuneta, hapana kwandinogona kuenda kunze kwekunge ndiri mu hwiricheya uye chiratidzo cheKarma chaita kuti hupenyu hunakidze zvakanyanya.
Kugara hakundinetse sedzimwe macheya uye furemu iri yakasimba uye yakasimba asi yakajeka. Ndiri kunzwa zvakanaka kuti vandinoda havafanirwe kuremedza nekundiwanzira kutsiva kana kundichengetera chigaro. Ndinokurudzira chigaro ichi zvikuru. ”
Yakadzokororwa naSarah Ferris anobva kuIrvine, CA
“Ini ndinoda ergo iyi hwiricheya"
“Ndakatenga chigaro ichi nekuti cheya yangu yakare yairema. Ini ndinogona kuzvibata ndega uye ndinogona kana kuisimudza mumotokari yangu yemota nekuzendama pamota uye nekuisimudza padanda remota.
Ndakaisa bhavhu pamota uye chigaro chakatsvedza mukati chaimo. Ndikaisa mabhureki neimwe nzira chigaro chinotsvedza mukutenderera. Ini handifunge kuti ine chero chakaipa. Handifungi kuti kutenga chigaro ichi hakuzofadzi. ”
Yakadzokororwa naJoe Cosh anobva kuHouston, TX
"Chigaro chakasarudzika chekarman ergonomic inonyatsogadzikana."
“Ndakaedza makumi gumi nemaviri ezvigaro zvekutakura ndisati ndawana Karman Ergo Ndege modhi- mwenje wakaringana kuti ini ndisimudze (21 mapaundi anosanganisira tsoka dzinofamba-famba), iine mavhiri akakwana ekumashure kuti andibvumidze kupusha chigaro kumhiri kwemasuo akasimudzwa uye pamusoro penzvimbo dzisina kuenzana.
Saizvozvo akasimba mamodheru (ese mabrandi) ane shamwari ruoko mabhureki airema 28-33 mapaundi kana kupfuura, nepo mamwe ekupedzisira mamodheru (15+ mapaundi) akange asina kusimba zvekutaurirana madiki mabhuru pasina kuramba achicheuka uye achidhonza chigaro nemutakuri wacho kumashure.
Pamusoro pezvo, chigaro chakasarudzika cheKarman ergonomic chigaro chakanyatsogadzikana, kusiyana ne "hingey-chivende" chigaro "chemazhinji zvigaro zvekutakura. Iyo unhu uye basa reKarman Ergo Ndege, pamwe chete nezvinotyisa zvataurwa kare, zviite kuti zvikoshe mutengo wepamusoro; Handikwanisi kukurudzira chigaro ichi zvakakwana! ”
Yakadzokororwa naLaurie L. kubva kuTacoma, WA
“Iyi ndiyo yakanakisa hwiricheya Ndakatombonyorera ”
“Iyi ndiyo yakanakisa hwiricheya Ini ndakambonyorera, uye ini pachangu ndakambozviedza, zviri nyore, ndinotoverenga zvinyorwa neruzivo nezvazvo kuti ndinzwisise kuti nei zvakanyatsogadzikana uye varwere vangu vakanditaurira kuti zviri nyore uye vanozvitora. chero kwavanoenda.
Neimwe nzira kana iwe uchigara mune izvi hwiricheya, inonzwa yakapfava, asi yakasimba, uye iyi modhi ine akawanda maficha ndakashamisika kuti inogona kuita zvayaigona kuita, uye nenzira yayo inopetwa, kwete akawanda mavhiripu izvo zvine izvo maficha zvakapetwa. Pakazara, yakanaka kwazvo unhu hwiricheya"
Yakadzokororwa naDr Richard Richard kubva kuPasadena, CA
VERENGA ZVAKAWANDA PAZVAKATAURWA NA "JAY LENO"